Home Archives - Page 2 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalafadhigii 37-aad ee golaha wakiilada Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah ka furmay caasimada Puntland, Garoowe. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdulaahi Camay iyo xubno kamid ah golaha wasiirada ayaa ka […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) maleeshiyaad looga shaki qabo al-Shabaab ayaa madaafiic cul culus xalay ku garaacay meelo ku yaala caasimada Soomaaliya, Muqdisho, waxayna sababeen ugu yaraan shan qarax, sida uu khadka taleefoonka ugu sheegay warbaahinta Bloomberg, taliye […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaafiic waa weyn ayaa caawa dhawaaqooda laga maqlayaa magaala Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Sida aya ilo-wareedyo ku sugan Muqdisho u sheegeen warsidaha Puntland Mirror dhawaaqa madaafiicda ayaa laga maqlayaa meelo kala duwan oo […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xil ka qaadis ku sameeyay taliyeyaal katirsan ciidamada haayada, Puntland Intelligence Agency (PIA). Madaxweynaha ayaa waxa uu xilalkii ka qaaday taliyaha ciidanka PIA, Sharmaake Shiikh Doon […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta xli ka qaadis ku sameeyay taliyihii nabadsugida ee sirdoonka qaranka (NISA), Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha. Madaxweyne […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada federaalka ee Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxa ay ku qabteen diyaarad raashin dhacay u waday gobolka Gedo ee Soomaaliya, sida ay ku warantay wakalaada wararka dowlada Soomaaliya. Madaxa […]
Kiinya waa in ay dib u dhigtaaa wakhtiga ay u goysay bisha November in 350,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku jira xerada qaxootiga ugu weyn Caalamka ay dib ugu laabtaan dalkooda dagaalada halakeeyeen oo […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wasiirka amniga dowlada Puntland Cabd Xirsi Cali (Qarjab) ayaa maanta oo Isniin ah kulan kula yeeshay maagalada Boosaaso saraakiisha amaanka ee gobolka Bari. Wasiir Qarjab oo saxaafada kula hadlay Boosaaso ayaa sheegay in […]